Ejipta: Manana televiziona roa ny fiangonana kôpta · Global Voices teny Malagasy
Ejipta: Manana televiziona roa ny fiangonana kôpta
Voadika ny 09 Septambra 2009 6:55 GMT
Rehefa nandamoka hatrany nandritra ny 15 taona ny andrana hametraka televiziona iray ho an'ny finoana Kôpta (kristiana ôrtôdôksa) dia nody ventiny izany ankehitriny fa nisy televiziona roa nahazo alalana ary misy efatra ihany koa eo am-panandramana.
Nanandratra ny Aghapy TV – avy amin'ny teny kôpta hoe “fitiavana” – ho fantson-tsary miompana amin'ny fijery kristiana voalohany indrindra any Ejipta ny The Free Copts Blog tamin'ny 2005.
Efa ela ihany no nikarakarana azy fa dia nandefa fandaharana vaovao tamin'ny talata teo ho an'ny mpijery any Etazonia ny televiziona kôpta voalohany indrindra, ny Aghapy TV. Teo ambany fiahian'ny Papa Shenouda III, dia mikendry ny hampiely ny fampianaran'ny fiangonana kôpta amin'ny alalan'ny litorjia, fandinihana ny baiboly, fandaharana natokana ho an'ny ankizy sy ny zavatra maro hafa ho an'ny fianakaviana kôpta manerantany ity orinasan-tserasera miorina ao Heliopolis ity. “Eo ambany fiahian'ny Papa Shenuda III tenany mihitsy ity televiziona ity, izay nanendry mpitondra fivavahana 13 ho komity mpitantana” hoy ny filazan'ny tale jeneralin'i Aghapy ny mompera Bishoy al-Antony. Nolazainy moa fa miainga avy eo amin'ny trano fitokana-monina iray avaratra atsinanan'i Le Caire ny fampielezan-tsary.
Nilaza i Khawater fa eo ampela-tanana ihany (Septambra 2009) ny fahazoan-dalana hampiely ny sary sy feo
Nolavin'ny governemanta Ejipsiana ny fangatahan'ny Sheikh Khaled El Guindy hampiely ny sary sy feon'ny televiziona vaovao AZHARI ao amin'ny NileSat nanomboka niasa tamin'ny faran'ny volana Aogositra 09 izay miainga avy any ivelan'i Ejipta saingy vonona kosa ao amin'ny NileSat. Nolazain'ny Sheikh Khaled El Guindy moa fa lavin'ny governemanta avokoa ny fangatahana fahazoan-dalana avy amin'ny fampielezantsary sy feo mifandraika amin'ny fivavahana rehetra. Notsongain'i El Guindy avy amin'izany moa ny tena fanapahan-kevitry ny fitondrana fa tsy nahazo alalana hanana fantsona manokana ny kristiana ka ny iray amin'ny fanontaniany dia nanao hoe: Nahoana no maro ny fantsona ho an'ny Silamo eto? Hatramin'ny Novambra 2005 ny Aghapy no niely tamin'ny alalan'ny zanabolana Amerikana.
Nanindrahindra ny televiziona faharoa indray ny Arab Church Forum (Diniky ny Fiangonana Arabo)
Neken'ny governemanta ny CTV – fantsona faharoan'ny Fiangonana ôrthôdôksa Kôpta izay an'ny mpandraharaha Ejipsiana malaza Tharwat Bassily. Nanomboka niely tao amin'ny NileSat (maridrefy 27500 – 11355 mijadona) mifanila amin'ny zanabolana Amerikana ny CTV ny fiandohan'ny volana septambra. Taorian'ny Krizy izay naharitra an-taonany niadian-kevitra momba ny fantson'ny (maridrefy) Kôpta ao amin'ny NileSat, dia nahazo alalana tao anatin'ny herinandro ny roa. Mbola misy efatra ihany koa eo am-panandramana; Al Hayah, Sat 7, Miracle.
Bikya Masr kosa mamaham-bolongana ny momba ny antso hampiraisana (fiaraha-miasa) ny televiziona mifandraika amin'ny fivavahana ao Ejipta:
Efa tafiditra ao anatin'ny andavanandron'ny fiaraha-monina Ejipsiana ny televiziona miompana amin'ny fivavahana, saingy mampisy fanantenana hamarana ny fifandonan-kevitra ara-pivavahana kosa ny ezak'ilay mpahay lalàna mampiady hevitra Naguib Gorbail, filohan'ny federasionan'ny mpiaro ny zon'olombelona ejipsiana. Nolazainy ary tamin'ny herinandro lasa teo fa hitondra ny soso-keviny any amin'ny Al-Azhar’s Grand Sheikh Sayyed Tantawi sy ny Papa Kôpta Shonouda izy mba hisian'ny televiziona iraisana.
Nolazainy fa ny tanjon'ny televiziona dia “ny handefasana fanambarana miaraka ho an'ny Silamo sy ny Kôpta amin'izao ankatoky faran'ny volana Ramadany izao.” … Nohazavainy ihany koa fa ny antony hafa manetsika azy hanao izao tolo-kevitra izao dia ny hanairana ny fisian'ny televiziona hita avy amin'ny zanabolana miantso ho amin'ny extremisme ara-pivavahana sy hamerana ny fandaharana ho amina fivavahana iray, na Islam na Kristiana “fa samy manaratsy ny fivavahana hafa avokoa na ny an'ny Islam na ny an'ny Kristiana ao amin'ireo televiziona ireo.”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 5 andro izay
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 7 andro izay